Jawaabta Beesha Ciise Ee Ku Wajahan Degaanada Lughaya-Awdal Ee Doorashooyinka Laga Xidhay « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Jawaabta Beesha Ciise Ee Ku Wajahan Degaanada Lughaya-Awdal Ee Doorashooyinka Laga Xidhay
Jawaabta Beesha Ciise Ee Ku Wajahan Degaanada Lughaya-Awdal Ee Doorashooyinka Laga Xidhay By hiildan on October 2, 2012	• ( 123 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« UDUB Mee, UDUB Mee, UDUB Mee?: Halkeebay UDUB Joogtaa, Halkeebay UDUB Joogtaa?Tacsi Geerida Marxuum Gaarriiye, Oo Ka Timiday La Taliyaha Madaxweynaha Ee Arrimaha Dhaqaalaha: »Categories: Warka (News)	Related Articles
Khudbaddii Taariikhiga Ahayd ee Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland, Mudane C/Raxmaan Saylici Ka Jeediyay Fagaaraha 18-ka May ee London	Mr. Siilaanyo Thank You and Congratulations but Never Surrender Our Sovereignty	Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo Marti Qaaday Ugaaska Beelaha Gadabuursi.	Hodan C/Raxmaan Dheere, Waa Fanaanad Qaran, Oo Ay Dhaleen Fannaaniin Qaran: Maxaa Ku Jaban Hadday Ka Qayb Gasho Xuska 18-ka May?	Todobaadkan Iyo Sheekadii Ugu Hadal Haynta Badnayd UK: Dr Siilaayo, Xirsi, Dr Maxamad vs Jaalliyada Awdal UK	Maanta Waa Maalin Khayr Badan: Soo Dhawoow Ugaas C/Rashiid	123 replies	»
hiildan	October 2, 2012 • 18:59	Ciise waxay dani ugu jirtaa in degaanadaasi ahaadaan Lughaya, waana sida ay yihiin. Haddii Hargeysa lagu daro, meesha ciise waxba uma yaallaan taana way og yihiin , soow maaha aado?
Reply ↓	Fariid	October 2, 2012 • 19:32	sidee hargaysa loogu karaa dhulakan. dhulkan dadkii lahaa ayaa jooga. kan ku darayaa Idoor kaliya ayuu ka masuul yahay. Saylicina meesha ha iskaga cararo.
Reply ↓	Sahal	October 2, 2012 • 20:38	Hiildan
kkkkkkkk inta halkan odayadan Ciise ka sheegeen waa intii shirkii Ciise ee Ceel-gaal qodobka mid ah oo ahaa LUghaya ha loo daayo xaduudaheegii 60 kii. Cajiid maxaad ka qaylyayseen maalintaas? Imisaan ini lahaa waar Ciise waxay doonayaan in aan degmada Lugahaya la kal goyn ee Gadabuursiyoow maxaad Ciise ku haysatiin waxayba ahayd maanta in aan istaageersanee?
Dee bal Hiildanoow ragbuu Alle inaga dhigee si uun ha la inii afgarto kkkkkkkkkkkkkk
Waa ogtahay waa haddad dhulka wax ka taqaanide degmada Lugahaya inteedii badanayd waxa la raaciyey Salal dee inta soo hadhayna hadday Gadabuursi afgarad la,aantan ku sii jiraan waxaab dalban doonaa in Hargeysa la noogu daro kolay ragaas si, unbaa wax loola fahmiye.
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 2, 2012 • 20:48	Sahal,
Hortaa waa adigan 1960-kii uun soo cel-celine Galbeedina arrintaa wuuba ka dhawaajiyee maxaa idin qarsoon?
ma laga yaaba in uu meeshaba ka baxdo magacan 1986-kii loo dhuuntay ee ah awdal oo wuxuu dhanba Hargeysa la hoos geeyo siddii 1960-kii?
Reply ↓	Sahal	October 2, 2012 • 21:00	Cali
kkkkkkkk inadeer reer abtigay siddii kale ayay bac ugu xidhantay oo hadday maqlaan Ciise iyo Isaaq ayaa wada hadlay xataa hadduu wada haddalkoodu ku dhamaaday aan isku hub urursano dee Gadabuursi “way noo tashadeen Ciise iyo Isaaq” uunbay ku yuusayaan kkkkkkkkkkkk
Nimankan Gadabuursi ee Lughaya u barooranayaa waxay fahmi laayihiin miisaanka uu Ciise ku leeyahay degmada Lugahaya meesha ay raacayso. Maxay samaynayaan hadday Ciise yidhaahdaan degmada Lughaya wixii ka soo hadhay ama Salal noo raaciya ama Hargeysa oo s/Muuse mowqufkooda raacaan?
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 2, 2012 • 21:20	sahaloow,arrintan Lughaya waxay iila eeg tahay mid rag goor ay noqotaba isku fara saari doono sababto ah ciisaha iyo reer abtiga ka sokoow waxaaba isku middiyo urursan sacad muuse iyo Ciise Muuse oo sidaan u fahmay Sacad Muuse yahay xeeb doon yahay sidaa reer abtiga waana labada beelood ee qarnigan 21 aad xeeb raadisga ah.
Hadaan si fiican masgaxdeena uga shaqaysiinan waxaa deganka asal ahaa u deji jiray reer ciise iyo ciise Muuse,oo oodwadaag ah mana dhici karto aqliyaanba ama siday u dhici karta in u ciise laba reerood dhex dego haduuba reer abtiga soo degin Lughaya sidanaa ku soo dhex galay ciise iyo Issaq!!!!
Reply ↓	Sahal	October 2, 2012 • 21:51	Cali
Waxaan dareemayaa in aad u fahantay in ay jiraan Ciise sida Gaza gooni Ciisaha kale uga xidhan oo ayna Ciise kale ee galbeedka isku xidhnayn xaalku siddas maaha oo Ciise reer badiye ahaan maanta wuu iskaga joogaa Garbo-dadar ilaa Gargaara iyo baigan Lughaya ee doorashooyinkla lag xayiray. Run ahaantti reer abtigay haddii doorasho caadil ah meesha ka dhacdo oo dad reer guuraa ahna ay helaan fursad ay ku codeeyaan reer abtigay warkooda wuu ku dayn lahaa. Horta siddaan aabahay oo dhashay qiyaas ahaan 1890 isna uu aabihii ka soo gaadadhey oo markaad labadooda intay jireen la isku daro 2 qarni ku dhawaad jirey reer abtigey xeebahan way degi jireen goortay soo degeen kolay waa intaas wixii ka horeeyay. Been iyo dafiraad aan meel jirina Ciisaan ka ahoo sidda reer abtigay halkan la soo kuudadsan maayo. Beenta internetka lagu qoro iyo ta toos loo sheegaana kolay waa isku mid oo ifkana wakhti kooban ayaan joogaynaa siddas daraadeedna ma, haboona in runta iyo xaqa la qariyo. S/Muusana way degi jireen bariga Lughaya markay soo qululaan. Iminkan Ceelahelay waxa wada degan Ciise iyo s/Muuse reer miyagse waxa aad ugu badan Ciisaha. Qululka ay S/Muuse ku doodayaan dee Ciisuhuba wuu hayaamaa oo ay Hargeysa iyo Gabiley u dhawaadaan ee miyaan kula moranaa? Waxaa muhiim ahin reerba dhinaca uu badan yahy taldeeda loo daayo reer guuraaguna siddiisii isku dhex guuro. Ciise Ciise Muuse iyo S/Muuse 2 daba wuu gaadhaa degaan ahaan. Waxa jira dhul Ciise dego oo geelu u daaqo oo Saaxil ka tirsan ama degmada Bulaxaar. S/ Muuse wuxuu doonayaa dhulkan uu u soo qululo ee Bariga Lugahay in uu Ciise iyo Ciise Muuse dhexdooda cidhiidsado oo uu bad tuulada la yidhaahdo Ceel-Sheekh ka samaysto. Raga damacan S/ Muuse wadaana waa dhamaantood rag reer Djibouti ah. Waxanse aaminsanahay in ragan S/ Muuse si uun loo afgaran doono lkn dhibta waa reer abtigay oo dhinac loo raaco jirin haddayna dhaqan koogan wax ka badilin.
Waxaanse Illahay ka baryaynaa tahayna in lagu dadaalo in wax kasta wanaag lagu dhameeyo ilayn dadku waa dad iswada dhalay oo aanan sina ku kal maarmi karin.
Reply ↓	Marunbaa	October 2, 2012 • 22:28	Waar horta nimankiinan ciise miyaydaan meel aad isku xogwaraysataan haysan waa sidee hadii Hildaan adeeradii gudhatihii idinka faray oo garooma idiinku taxay waxay ahayd in aad inyar oo horow mar ah na tustaan. Durkiye, Sacadmuuse damaciisu wax warwar ah naguma hayo duul nolosha xeebta uma adkaystaan sida Qorax joogu ayna dhaxanta ugu adkaysan balse siday u eegtahay moron kiinii in daad qaaday baan u maleeyaa oo waxa kuu cadaynaysa, itaal yarida codka maanta ka soo baxay ragii sadexda baxay tartankii xeebta. Maanta sheekadu heeladii way dhaaftay oo jiritaankii somaliland baa cidhiidhi la galinayaa hadii qunyar socodku tanaasuli jirayna maanta tanaasul qolbay ku xidheen.
Sahal, falaadhi gilgilasho kaagama godaa la yidhi, ragaad iska soo horaysiin jirtay maanta si cad bay kaaga horeeyaane ii fadhi adigu intaan dhulka soo xadaynayo.
Reply ↓	Sahal	October 2, 2012 • 22:52	Marunbaa
Adigu maxaad ka sheegi kartaa Lughaya iyo dhul aanad waxba ka aqoon ileen angaa wax aragnay. Marunbaayoow maalin horaan kuu sheegay Ciise in uu laba mid yeelo doono in uu dawlada Somaliland ee uu cabashadiisa ku aadan degaanadiisa doorashada laga xidhay u gudbiyey ka warsugu iyo in haddii laga maarmi waayo haddalka dadka uga dambeeyo ilayn iyagaa xaqla ahee. Maanta. Adna waadigan tartan iyo sadex sheegayaa lkn waa xigmad Ciise in haddalka intoo dadka la dhegaysto qof u dambeeya la noqdo. Dhambaalka ay Ciise maanta muujiyeena waa mid tageero u ah dawlada Somaliland oo garanaysa cida dhulkan Boorama iyo Hargayso lagaga haddaaqaayo degan. Waana astaan muujinaysa in Ciise dareemayo in cabashadoodii loo aqbalay oo degaankii laga coddayn doono.
Maaintaas go,aankaas lagu dhawaaqo maxay Marunbaa iyo Gadabuursi odhan doonaan?
Waxad soo xadayn kartaa inayna jirina dee adba waa ogatahay e ku riyoo siddadii Ciise iyo Isaaq isma soo gaadhaan siddadii kkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	cadawe	October 2, 2012 • 23:13	waar niinka leh dhulkaa waxaa laku gartaa ismaa buuqiyo oo ciidlah maqeelyo ee uu suuga talaad iyo xajaada maarkay tiimado ayuu soo dhigaa caday mihiisa uu ku shee ganayo ee arag waxaa uu ciise ku sheeganayo dhuulka abti dawo c/geedi iyo ciiso fadhiyay
Reply ↓	cadawe	October 2, 2012 • 23:14	Reply ↓	Marunbaa	October 2, 2012 • 23:28	Sahal, Lughay, hargaysa, Borama iyo Harta sheekha inta u dhaxaysaba waan arkay balse in aan adiga kaala tashado aqoonteeda wax micno ah ma samaynayso. Sheekadu se way dhamaatee cabaadka iyo qayladu intii hore hakuugu eekaato inta ragu herdiyayo marlayna dhawaan ama anuunbaa hal techno ka ah kusoo diri ama ninkii awalba awrka kugu kicsan jiray uunbaa technica diisii kuu soo diri. Durkiyoow bahasha dabqiska ka daa rag dhaantada yaqaanbaa ku jiree.
Ball kuwan waraabaha qalanaya hadal kooda u fiirso Sahaloow sawka ciise meesha ku jabay maaha.
Reply ↓	Marunbaa	October 2, 2012 • 23:33	here is the right one. Hadalba waa markay koonfuri ku soo gaadho sahaloow waana halkaad gashaa. Reply ↓	Marunbaa	October 2, 2012 • 23:35	Cadawe, waxan u maleeyaa madasha haasaawaha waad ku cusub tahee ragu way isa soo gorfeeyeeen Sahalna abtinimo iyo inaan la yaal nimoba wuu ogol yahay. Adigu inaad soo xiiqdaa kuu hadhsan horta.
Reply ↓	Timacade	October 3, 2012 • 02:40	Sahal iyo Cali Durgiye…….Runtii anigu wax badan kama aqaani dhulka xeebta gadabursiga iyo ciisaha, dee dad badanina way idinla doodayaan oo ma rabato inaan idiinku biiro, markaa meeshii fair noqon mayso. Lakiin waxan raba bal inaan idin weydiiyo inaad fahansantihiin tariikhda Kelmada ” anifoos” sida ay somalidu u yidhaahdaan, lakiin ah kelmad english oo ah ” unopposed”. kelamdan odayda meesha ka hadlaya ayaa iclaamiyeey oo yidhi anaga dhulkan aan hadda joogno ” unifoos” baan kaga soo bixi jirnay.
waan fahansanahay inaad dhalinyaro tihiin oo aydnaan soo gaadhin tariikhda ” anfoos”, lakiin bal waxan rabaa inaad ii fahansiisaan sida uu odayga doodiisa ku darsaday u fahansanyahay. Anigu waxan markaa isku dayi inaan sharxo sidaan u fahansanahay ee aan hubo inay gadabursiga badankiisuna u fahansanyiin kelmadan.
Reply ↓	Marunbaa	October 3, 2012 • 05:05	Timacade, thanks. Ninka nin ciisa ah baan qalanayaa leh een meesha soo gashay baa i dhaafisay in aan kalmadaa ka faaloodo balse miyayna ahayn waxaan sahal iyo cali u sheegi jiray een odhan jiray Ogaadeen iyo ciise somaliyi way marti galiyeen balse miyayna odayaashu cadayn in marti ahaan lagu siin jiray. Taariikh dii Darbi iyo Marunbaa lagula mormi jiray iyakaa bada soo dhigay, Ka jaqadee jiqlo waynaydee.
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 3, 2012 • 05:33	marunba,
ma fahmin sababtaad cajalada youtube iyo waraabaha ula soo orodday ragina reer boorama markii suaal la idin waydiyo miiskaad hoos gashan markii mawduuc la soo dhigana theemahaa laga hadli waad ka boodaan si aad dadka u marin habaabisaan.
sahal wuxuu ni warsaday iska soo hela hal qof oo gedabuusi ah oo dhulka wax ka yaqaan halkay ahayd in aad nin hebel u soo xosahaan wad wada dhuumateen,
Durgiyana wuxuu hortiina ku warsaday nin soo qaataa magaca Aar Harawo oo meel Erer Goota la yidhaahdo rabay in u ka sheegeyoo hadaan waydiiyeey meel ay ku taalana waad argayseen wixii firxad ka dhacay meesha.
hadaba niman yahoow ama sida ragaa noola dooda ama naga dayaa caga bidhoodka aad sida caana nuuga u wada caga bidhoonaysaan yar iyo weynbaa.
Kelmadda anifoos ciisa keenay manaa ahaa meeshi ugu horeesay ee u keeno anifoos ee Diredhabay ka dhacday 60 sanno ka hor, oo 10 sanno ka horbay ka dhacday meel la yidhaahdo Mayso maantay ka socotaa Gadhmalu sababtuna maaha wax kale waxay u jeedaan uun dhulkayga waxaan ku joogi voot la,aan iyo cashuur bixin la,aan oo ciise cashuurna ma bixin jirin vootna lagama qaadi jirin laba shayba waxay u diidi jirin ila maantana u diidaan waxay cashuurta waxay u haysteen BAAD aan waxbaa loogu qaban wayna tahay Vootkana maaha wax ay dhaqan u lahaayeen dawlad si fiican uga raaridana dhulkeena ma soo marin.
arrintu waa sidaa haddaadse sidiini soo watan ciise waa marti dee marti ha ni xukunto ku hoos noolaadda.
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 3, 2012 • 06:10	@Timacadde,
Runti addu waxaa tahay sidaa qoraaladaada ka muuqata qof wax og waxana laga wada hadli karo addaa soo cuskaddee kelmada taariikh,waxaan maalin iyo habeen kastee ka hadalaayi waa taarrikh wax badana waad aragtay wixii aan halka soo dhigay waanaan kuugu soo celin karaa min falag ha ii jigaarin sidaan ka bartay rag badan oo meesha ka doobiya, waxaaso oo qoraalo archive ah oo laga soo min guurshay raadkii ay reer Yurub kaga tageen Awdal ee ciise ka yahay Nr one ma waxaad aaminsan tahay hadana in u ciise awdal ku yahay marti?
Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 06:51	kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ciisee lughaya sheeganaaya.
Waar ileen 4 tan qof een nabadgalayada siiyay waa hore ayaaba maanta dhul iga raba.
Hada waa carabwayntii galbeed!!
Ma odhan kartid erayga ah “Dhulbaa lagu moransanyahay.”
Ta ka dhacdana waad arkidoontaa.
Ciise 1977 ka soo biloow tarikhdiisa.
Wixi ka horeeyay,cawaan.com.
Farasgayga ayay ka ducaysan jireen haduu eeyar dhaafo.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 07:07	Wali Ashama
Dumarka Gadabuursi aan kaal kaftanee meesha iska eeg ileen haddaan dhooba yar kugu soo tuurno hadhowbaad siddaadii odhan “HOOYADIIN WAXAA KU SAMEEYEE(ileen axmaq ma ihi oo afka soo marin maayee..) Galaha noo baxa” kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 07:10	Marunbaa Waa ku sidde habad iska morama badnaatide siddan waad dhaantee bal kor u soo bax. Waa maxay waraabe iyo waxa aad ku warwareegaysaa mise ” hooyaddiin wa …. mesha nooga baxa” ayaa adna kaa soo dhow kkkkkkkkkkk
Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 07:17	Wiil Ciise iyo Dumar Cise oo Gaal Legionair ah isku laynaya ayaan u soo joogay.
Taa halkaa ku dhaaf.
Hadaad tahay Reer Awdal Sida dharka loo xidho ayaad baran lahayd,maanad qaawanaateen.
Teeda kale walaigay maan arag Ciise uu Isaaq dhalay ama Isaaq uu cise dhalay oo Reer Lughaya,Zeylac,Geerisa,woqooyi galbeed ka yimid. Cadayna intaa ayaa kugu filane sheekada uu Ina Geele basal soo malmaluuqay hadaad run u qaadatay anaa ku tusi ta runta ee dhulka taala.
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 07:57	SLD marka hore magaca ha laga badilo oo ha loo bixiyo TSCI dhulkii sacad muuse iyo ciise intaa ka horaysase waxba idiinma suurto galayso…s/muuse waa inuu matalaa faransiis iyo cali caref…..
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 08:40	cadaawe mataasaa cadayn kuu ah abaar waa lacaawiyaa maashay kacacdabahttp://www.youtube.com/watch?v=8eodreumWI8&feature=player_embedded boqolaal urur oo samaroonihiba way caawiyaan waxaguma bakhayl waxar gawracay balaybaydh badanaabaa
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 08:44	Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 08:50	Marunbaa
Maanta waabad iga qoslisay.
Garowe ayat Soo marayaan Ragii Waraabaha qalanayay.
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 08:53	Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 08:55	Caasha Subax wanaagsan Ina adreetay ma ficantahay.
Ciise Madoow,Ina Geele Basal ayaa wax u soo akhriyay.2 Wiil oo aan u diro ayaa ku filan Cawaanka qaawan ee Guraagaha aan musliyayay 100 sano ka hor.
Kulayl inagu hayo Ciise Waraabe isla iloow sheekadisa.
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 3, 2012 • 09:24	Aisha Luulay maxaa maanta ku jiidhay saw adigii inta ka yar cuslaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anagoo kolkii horabaa ku dhaxamoonay dhagaxdan qaqaboow ee ay reer Boorama nagu soo tuurayaan ayaad adna maanta noogu biirtay kkkkkkkkkkkkkk.
cadaawee wuxuu ni tusay in aad sarajooga ku riyoonaysaan wuxuuna ni daawisiiyey ciise min saylac ila Bula-xaar is daba yaal oo maqal iyo muuqal ah.
waxayna ahayd in aad arrintaa beenisaan oo aad na daawisiisaan in u hal nin oo ciisa ahi joojin dhulka oo maqal iyo muuqaal ah,laakiin nasiib daro waxaad ku daashay wixii cadaawee sameeyey wax ka liita anaguu waan ognahay in ay dhoowr reer oo mahad case ah oo sigada geela mamasanka qaadan jiray ay joogan dhulka kuwiina waad na tustay uun bes sorry aado Aisha dhalalaa hadaan kaa naxashay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Reply ↓	cabdi	November 17, 2012 • 09:51	been ayaad ku sheegtay ma jiro ciise yaala saylac ila bulaxaar balse wa wax yar oo magan no ah anaga hadii anahay samaroon ciise dhul ku ma leh deg lughaya iyo saylac midnama ee ciise waraabe wa u riyoonayaa
Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 09:40	Waa Cishii u Ina Rayaale ka keenay Qaxootiga Jabuuti jooga ee uu unta lacagta laga qaatay.
Hadal uunbaa ka dambayn”sidaa waxaa yidhi Rayale oo qaatay lacagtii uu siistay keenida uu keenay dad qoxtti ah Degaanka Salal iyo Awdal.
Reply ↓	Darbisamaroon	October 3, 2012 • 10:05	Sahal
Iga walee inaad dhawaan ka dhex siiban doonto Samaroon iyo Isaaq mar hadii aad noqotay hasha labada geed jecel,Labo gab dhexdood buu waraabuhu ku gawracay.
Balka warama Samaroonoow nin ku yidhi i fahan oo hadana ku leh aan kula maamulo aqalkaaga oo qolka hurdada iyo fadhiga iyo sariirta ama reerkaaga dhan ii daa hawshiisa anaa si fiican u maamuli cidaan doono ka kirayn lacag ka qaadan Sacad Muuse adiguna i fahan oo abti baan kuu ahaye i maqal miyuu haboon yahay inaad wax ka dhagaysato mise in aad ku dhex daldasho gurigaaga ilayn isagaa kugusoo galay inan la yaal iyo abtiye inuu gurigan yaree qol loo bixiyay Salal qolkii kalena loo bixiyay Maroodi Jeex qolkii fadhigana loo bixiyay Gabiley miyay ina qabataa in aan dhagaysano maftaalada ina Geele Bakhti iyo Sacad Muuse aan ka kirayno dhulkiina…..?
Maftaalada ila dhaaf anaga horaan kuugu sheegnay in aanad marna abti i odhan marna aanad dhabta Sacad Muuse ku fadhiisan kala dooro in aad dhabtaasi aad ku fadhido iyo abtinimo oo warkaaga kala cadee Ciisoow.
Lughaya waa Awdal Gabiley waa Awdal wax la yidhaa Salal iyo Maroodi jeex ama Saaxil ma Jirto waan diidnay Bulaxaar ilaa Wajaale iyo Gabiley halkaana mari ilaa Lawyacdo waa Awdal waana dhul Samaroon waxii nala dagani waa iska Paratsites yar yar oo nagu dhex nool haday madaxa la kacaana dheengad dhabi oo kulul ayaa u qoran.
Waxaad ku celcelisaa Dumarka Samaroon aan kala kaftamo adoo is leh karaamada nin kula hadlaaya hoos u dhig waa iska naagnimo aad u dhalatay oo inaad hadaladasi la shirtimaado waa afkii dhidiga raga ah oo aan ka helin sheekada dumarka ayaa naca goobaha raga markuu haween arkana xaymankuu soo qabsadaa oo soo lafyoodaa oo ka bilaabaa naayaa naayaa hebalaayooy isagoo gacmaha jajabinaaya qaska dambena weecweecinaaya ayuu dumarka dhex fadhiistaa haduu doono wuu iska dhex seexdaa ilayn waa labo dhidigoo ayaguna kama cabsoonayaan inuu ka dhexmariyo saqda dhexe oo halkasaa subaxa laga wada toosaa markaa ma gayo dumarka Samaroon nin noocaagaa oo kale ahi ee dumarka reerka afka jeedi.
Mida kale hadaan usoo noqdo ta aad leedahay Sacad Muuse wa la fahmi lkn reer abtigay lama fahmaayo kkkk adeer dee ugumaba talo galin inaad i fahanto nin i leh dhulkaaga sii Sacad Muuse anaa ka kireeyay oo Djibouti ayaan kusoo shirnaye dhulka ku wareeji Sacad Muuse oo gobolo aan sharci ahayn oo magacyo bug ah aan kaaga qato Awdal oo laga aqoonsanyahay caalamka kuna jirta Khariidada caalamka dee wax aan kaa dhagaystaa meesha ma yaalo.
Salal waa iska been an jirin, Sidoo kale Saaxi waa qayb ka m id ah AWDAL Gabiley iyo Maroodi Jeex waa Awdal markaa waxan aad wado in aan isla fahano umaba baahni oo dee nin yidhi aan qolkaaga hurdada iyo fadhiga reerkaga aan kula maamulo dee haduu gurigayga si nabad ah kaga baxo ayuu nasiib leeyahay adiguna i fahan ayaad lasoo taagantahaye hadad dhulkaasi ad kusii noolaato ayaabad leedahay nasiib ee wax aan isla fahmaynaa meesha ma yaalo xariiradnews ka samayso meel aad ku fahansiiso Samaroonka ninkii kuu jilca ee aad taada ka dhaadhicin karto.
Samaroonoow dhulkiina in cid aan u dhalan laga kireeyo ma haboontahay….? Ciise oo ku joogay inan la yaal ayaa qayla dhaan u dirtay Sacad Muuse.
Sahal hadalkiisa ha maqlina waa jiir intuu ku qaniino ayuu hadana ku afuufi si aanan u dareemin micidiisa sumaysan,
Adeer Awdal kiro maaha dhulkan anagii ayuu nagu yaryahay cid aan taako u ogolahay ma jirto
Reply ↓	Isaq Boy	October 3, 2012 • 10:54	Kolba markay dood yari si macaan isugu duba dhacdo ood is tidhaa rag mudakar ahbaa is helay oo iyagoo doodaya hadana kala faa’idaysanaya ayuunbay qaar sidii xabaglayaasha u hadlayaa daf soo odhanayaan.
Kuwaasaad niyow u nacaysa inaad halkan wax ku qorto ama akhridaba.
Reply ↓	Isaq Boy	October 3, 2012 • 10:57	Qaar aad is odhanayso cajalad yaroo dhinac kaliya ah bay liqeen oo hadal soo noqnoqanaya oo biyo dhacay siday u abuse garaynayeen uun wada ilaa yawmal diin.
Dhabqis ilaa dhabqis.
Bahasha kor u baxa niyow.
Reply ↓	Isaq Boy	October 3, 2012 • 11:03	Timacade iyo Cali Durgiye.
“Unifoos” ta odaygu ka dhawaajiyay ee uu yidhi waligay baanu dhulkan kaga soo bixi jirnay waligay maan maqal ee ma “one man one vote” af taliyaaniyaa lol
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 3, 2012 • 11:07	Buugii aan mar horaa soo wada akhriyaa ni dihi eed ka wada muquurateen wuxuu ahaa magaciisuu:/colonisation francaise au pays des somalis/ waxaana la qoray sannadkii 1914-kii waxaana qoray nin fransiis ahaa oo magaciisa la odhan jiray Henry le point page-kii 49-50 waxaa ku qoraan qoraal calool xanuun igu beeray runti ma jeclayn in aan soo qoro ee waxaan door biday in aad indhihiina ku soo akhrisataan oo aad faalo ka soo bixisaan laakiin waad ku dhici waydeen markaasan goostay in aan halkan ku soo qoroo waayo dee waa taarrikh ku qoraan archiveka aduunka anaa waxba kama qaban karo anaa ma qorin kaliyaa waxaan rabaa in dadka golahaan ku xidhan ee soo booqda in ay nala akhristaan hadaad idinkuba heli lahaydeen qoraalo ka sheegayn wixii ciise iyo gedabuursi dhex maray oo qoraal ah libintana siin reerkiina dee meel walba waad xardhi lahaydeen qoraalkiina waa kaan ee akhris wanaagsan waana nin gadabuursi ah oo dhiigiisu ku qalalay banka xeebta awdal waraabe iyo dacawna ku qureecdeen raqdiisa:
J,ai cherche dans la caravane,
Il y avait un Europeen,
Des abyssins m,ont menace,
menace avec leurs fusils,
Allah n,a pas voulu qu,ils meurent.
Mais le prix du sang est demande aujourd.hui!
un Gadaboursi est mort,
il seche au desert,
les chacals crient,
l,hyene le mange,
III l,issa est fort,
il tu les autres,
il prend leurs chameaux,
il prend leurs chevaux et femmes,
Les dagaboursi est l,habitant de la montagne,ennemi jure du somali (issas)de la plaine.
Le pays est issa,
les troupeaux sont issas,
le Gadaboursi est mort!
Buugii Ali Coubesh qorayna waa ni sugaayaa inkastood markiiba ku xukunteen in u been la soo dhoo-dhoobay yahay.
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 12:33	ma caruurta ciisha ayaa lagu seexiyaa sheekadana…
Reply ↓	Isaq Boy	October 3, 2012 • 11:07	Mise waa cid nagula tartantaba maanu arki jirin oo iyadoo aanay cidina na challenge garayn ama nala tartamin baanu kaligayoo musharaxiin ka ahaan jirnay oo ay anaga noo xidhnayd meeshu?
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 3, 2012 • 11:13	Issaq-boy,
warku macne dheer uma baahna runti waa adoo lagu yidhi nin Daarood ahi ha isku soo sharaxu Hargeysa iyo oodweyne
Reply ↓	Ina shanbogoleh	October 3, 2012 • 11:40	what the hell is going on? dadka cusub ee qaxootiga waa ayo??
walahi waa wax layaab ah… hurta maxad case ino xudad secure kaa diigto ayaa wanagsaan ila djibouti wayo waa dhul maxad case…. mida kale waxan oo kale lama post gareyo waa djibouti iyo hargaysa oo qorshahan wata… but it will fail soon… daad aan reer saciid iyo bahabar muse iyo abrayn iyo bahabar celi iyo reer maxamed iyo jibrel younis moyaan eh dad kale kumaan araag dullka… soo maxa keeni murankaa…?
Reply ↓	Ina shanbogoleh	October 3, 2012 • 11:46	hurta ciisaha kuwaas hurta waa dadka ugu liita somalidaa daad istiicmaar raacay oo asaalkuugu iyo fasalkugu iibiyey mida kale hadu qorbaha jooga amma guduha djibouti joogo sookii gadabuursiii iis moodii jiirey gurma ayo kaligi istagay.. waba yab eh?
Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 12:34	Waa Dameer ciyay hadalka Odayada Ciise ee Hargeisa ka hadlay.Wax ay i yeeli karaan ayaaba iska yar.Wakhtina hayskaga luminina e’ danta ka raaca.
Hadalka Cisuhu iigaama duwana midka kan Dameer Ciyay,sidaa darteet ayuu maqalkiisu iiga dhigan yahay.
Reply ↓	Timacade	October 3, 2012 • 13:02	@ Ali Durgiye
Sidaan anigu marar badan sheegay meeshan waxna waan ka bartaa, waxana waan ka dhigaa ( Arday iyo Macalin ba) waa ka ahay. Marka aan qof su’aal weydiiyo waxan u weydiiyaa inaan really fahmo waxani laga hadlayo. Xitaa fikrado aan anigu rumaysanahay ayaan dadka kale weydiiyaa bal sida ay u arkaan, dabadeedna waan isa saxaa haddii wax uu qofkaas kale ii sheegay uu runta uga dhawyahay waxa aan anigu rumaysanahay. Runtii aad baad u mahadsanatahy jawaabtaada, weligayna fikirkaa aad ka dhawaajisay ma maqal, waana wax dhici kara ” plausable” waana very interesting.
Jawaabtii sida aan anigu u maqlay waxaad u egtahay inaad already maqashay, lakiin haddii ay cid gadabursi ah oo wax ku darysaa jirto, please go ahead and articulate kelmada “anifoos” “unopposed” tariikhdeeda iyo sidaad u maqasheen iyo macnaha ay qofka gadabursiga ah u samayso.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 13:44	Gadabuursi hadday siddan ku sii socdaan oo ay iska qaban waayaan dadkan magacooga huwan ee wax dadku hadlin ku hadlaya dee waa mid nusqaan ku ah iyaga cid ay cad iyo af-xumo wax kaga qaadi karaana ma, jirto. Gadabuursibaa bad leh oo dekad ka samaysanayan waa riyadii aad waligeed isku maaweelin jirteen. Ciisena dhulkiisa wuu yaqaan min Bulaxaar ilaa Caddayta cid uu taako uga durki doonaana ma jiri doonto ee maxaad samayn doontiin haddaad abti iyo wanaag duri ka bix waydeen.
Isaa-boy nala arag dadaka ay Ciise iyo S/Muuse inaga hayaan bal isku day in aad ku qanciso inay sidda asluubleh oo la, fahmi karo dooda uga qayb galaan iyaga dhinaca kalana cidna aan u jixa-jixayn. Raali ahaow reer abtigay aan xaal kaa siine kkkkkkkkkkkkkkkkkk lana soco hadday beeli kaa banaantahay reerku dumar an cid kale laga helin ayay leeyihiin.
Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 14:03	Sheekada meesha ka socotaaba waa mid laga hurinayo jabuuti.Sidaa ayaan soo ogaaday.
Ina Geele Basal iyo tan uu qabo ee aanu xataa Ninkii canfareed furin,ayaa maqlay Inay Gadabuursi dekad ka saynayaan Lughaya.
Taasi waxay xaasid nimo ku abuurtay Ina Geele Basal iyo Beesha Habar Awal oo Berbera iyo Jabuuti wax ka la soo dega.
Dekadaa sidii loo jiijinlahaa ayay markaa ka sheqeeyeen ciisee iyo Habar Awal.
Ciise ma joogi doonaan Awdal iyo Salal?
Su’aashaasi ayaa u baahan inla laga jawwaabo.
Sida ay ila tahay Ciise ma joogidoonaan meel ku taal Awdal iyo xeebaheeda.
Waxaana baryayay waa cusub oo aan sugayay Mudo dheer.
Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 14:07	Sahaloow Marka waxan ku arkaa adoo dumar ka sheekayna ,
Ciise xataa Dumar malaha,waayo dumarka fiican eed sheegasaa waxay ka yimadaan,qoys fiican iyo Abba Fiican soo koriyay.
Ciise xataa Dumar ma laha,taasi ayay Somali oo dhan ogtahay.
Yaa Modow raacay,oo ajaanin raacay. Wiil Ciisoow.
Reply ↓	haldoor isaaq	October 3, 2012 • 14:24	aqyaartaa waad salamaantihiin
sahaalow odhahdii gadabuursii raag ma la haa ee dumaar buu leeyahay
wabaa rumowday intaaan soo galaay websitkaan.
sababto geesiga gadabuursii waa darbii jiif oo kalee oo waxanaad laa kaftaantow oo laa gogortaamto lahayn.
mantaa lagaa bilaabow dhinaaca gabdhaha samaroon baan uu jeesanayaa walii baa gabdhoo aad uu qurux badaan oo asluub lee yaan kuu arkaay canada
Reply ↓	Wali Ashma.	October 3, 2012 • 14:59	Naag Isaaq
Kuwiinii ma Jamaican iyo Madow bay raceen,mise Hawiye.
Single Mother Idoor soco iska qayil kuwiina ayay Rag la’aan haysaa.
Reply ↓	madhabaa	October 3, 2012 • 15:24	balo ma jirto ee isdejiya samroon wuxu daadaheeyaa ismaaciil iyo siilaanyo oo waan korinaa canfar ka rid waa ciiseee . kala celi waa marya aloolkii oo is haystee.taasi waxat dhashay dawlad jibouti iyo somaliland oon ku raaxaysanyno .waxani waa bootayn iyo mirqaan jebin ee balo ma jirto
Reply ↓	kaydo	October 6, 2012 • 07:56	maxa ka runa masidaba ukala ceelisan
Reply ↓	Timacade	October 3, 2012 • 15:30	Gadabursiyow xaalku waa sidan:
Ciise iyo Isaaq isticmaalayaan tactics aad ” sophisticated” u ah oo ay ka muuqato, khibrado iyo inteligence la habeeyey ” Articulated” ah oo ujeeda iyo ” objective” la yaqaan leh. Marba haday meel soo gasho gacan dawladeed ” instrument” of government way adagtahay sida looga badiyo. Waayo dawladu waxay leedahay ” resources” u fududaynayo inay go’aan ujeeda leh oo aanay caadifadi ku jirin gaadho. Sida aniga ii muuqata, arrimaha ka socda gobolka Awdal waa arrimo aad u siyaasadaysan oo ay labada dawladood ee dhinacyada ka xigaa hogaaminteeda ay gacan weyn ku leeyihiin. Samaroonow waxad ogaataan dawladuhu waa khatar, xitaa dawlada ugu taagta darani, waxyeelo weyn ayey gaysan kartaa, waayo, waxay ogtahy xogo aanu qofka caadiga ah sinaba kuheli karin.
Dawladu waa the biggest friend and the biggest enemy to any society. Dawlada maraykanka ah ee addunka meel walba awoodeedu gaadhay, aniga oo citizen maraykan ah awwod uma laha xitaa anigoo jidka socda ay igu joojiso oo ay minute xoriyadayda iiga qaado iyado aan sabab haysan. Dawladuhu waa khatar haddii aanay checks and balances jirin. Dawladaha qolloyinka ku dhisanina wayba kasii khatarsanyihiin oo dee nin marna qolo kuu sheegaynaya marna kuu dawladaynayaa dhibtiisa ayuu leeyahay. Hadalka uu maanta cali durgiye ii sheegay ee ah inuu ciisaha, fundementally aanu ogolayn cashuur iyo Vote, waa fundamentals ka dawlada, markaa qofka diida in cashuur laga qaado iyo inuu ogolaado in dhulkiisa vote uu qof kale soo malmalaaqay laga galo waa qof fahmsan khatarta dawladu leedahay haddii aanad haysan instrument aad iskaga celiso.
Dhibta gadabursiga badankiisa haysataa, qof kasta oo dawlad u sheegta way iska daba raacayaan, hadhowna way ka cabanayaan oo waxay odhanayaan dawladiibaa na dulmisay. dee dawlada baas sow adigu iskuma dhiibin, sideed hadana uga caban karta.
Markaa laba mid uun reer tolkay ha soo galaan. Dawladahan aad hor ordaysaan inaad marka hore, ka samaystaan instrument ilaalisa inaan la idinku xadgudbin. For exmaple, Somaliland Hesshiiskii u horeeyey ee beelahu wada galeen waxuu ahaa in qolo waliba gobolkeeda maamusho, nabadgalyana lagu wada noolaada. Waan hubaa inaanu mid idinka mid ah ka jawaabi karin, sababta ay ku timid in gobolka Awdal Governerkiisa uu soo magacaabo, maamulana wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland.
Mida labaad ee ay wax idiinku hagaagi karaani waa inaad idinku identity dawladnimo aad samaysataan, taasina waxay u baahantahay inaad idinku heshiisaan. Ogaado, dawladaha inagu xeersan, objective kooda way bedelaan mar walba based on the realities on the ground. Dawladuhu emotion malaha, waana sababta ay go’aamadoodu effective u yihiin. on the other hand, Oday dhaqameed meel ka hadlay, malah objective iyo goal, waa maalin hadle. Gadabuursi waa maalin Hadle miidhan.
Reply ↓	gudoon	October 3, 2012 • 21:07	tima cade inader adigaa dhamayey waa in la heshiiya first tan dowlanimada aad ka hadashay somaliland maaha dowlad la aqoonsana yahay mana badali karto xuduudaha gobolka awdal jabuuti shaqaba kuma laha somalia oo waxba kama badali karto gobol ku yala somalia lakiin maanta today waa in gadabursi isku tagaa tashadaa wax dowlad u egna dhistaa idinka raga gadabuursi dhamaan waxa la idinka sugaya inad midowdaan heshisan dumarkuna way idinku dabo faylayan inader adiga bilow timacadow i hope in aan guulaysano xaqa guulaysta,,
Reply ↓	Isaq Boy	October 3, 2012 • 15:44	Conclusion kaan ka gaadhay sheekadan Xeebta waqooyi.. Inkasta oonan waligay marin/arag dhulkan la isku haysto hadana waxa ii soo baxday markaan dhagaystay hadalada dadka degaankaas ka soo jeeda iyo kuwa arinku siyaabo kala gadisan u khuseeyo iyo kuwa u dhuun daloolaba:
In ay Degmadan Lughayi tahay sida (Jerusalem).. oo ay saddex reer degaan, taariikh badana deganaayeen.. Se lagu kala badan yahay.. kolbana qolo ku gacan saraysay.. hadaan soo dhaweeyana ay tahay sida (Ceerigaabo).
Xalkeeda iyo kala xadaynteeduna wuxuu ku jiraa gacanta Xukuumadda.
Wada nololaanshaha shacabkeeduna wuxuu ku jiraa gacanta wax garadka iyo madax dhaqameedka degaanka degan oo qudha..
Meelaha noocaas ahna Nabadeedu waa very fragile iyo qosol-ku-jab.
Hadii dad dano gaar ah wataa arimaheeda soo fara geliyaana waa halis inteeda leeg. Waxayna wax yeelo u tahay kaliya inta degan haday iska garan waayaan si wada jirana isaga qaban waayaan. Fadhi-ku-didirka halkan ka buuxaana waxba yaanay sii buun buunin, naguna wareerin arimaha degaano aanay waligood sawirin indahana saarin.
Gedabuursina waxaan odhan lahaa:
Ka nasta “Conspiracy Theory” –ga.. iyo caqliyada mu’aamarada eed wax walba ku eegaysaan.. iskana fura bacdan idinku xidhan ee “waa lanoo heshiiyay” iyo “waxbaa naloo maleegayaa” iyo “boholo dusha ka qafilan baa na loo qodayaa”-da.. dadkiina dhinac ka raaca waaqicana indhaha u fura.. sidaad is moodaysaan uma sii xumidin cid idin necebina way iska yartahay ee qalbigiina ka maydha shakiga.
Reply ↓	Timacade	October 3, 2012 • 15:57	Isaaq boy….fikirkaaga aad dusha ku qoraty ma khaldana waxuse ku dhisanyahay informationka aad halkan ka heshay. Ilama aha in meesha la isku haystaa ay Tahay magaalada lughaya ee waxa weeyi dhul lughaya district ka tirsan oo hageisa dusheeda ku yaal. Ceerigaabo waa magalo dhexdeeda la kal deganyahay, sida Burco ama Hageisaba.
Jawaabta aad bixisay waxa kale oo ay cadaynaysaa sida looga gacan sareeyo dhinaca message ka reer tolkay. Waayo dee su’aashii aan weydiiyey ee ahayd inay dhinacooda sheegtaan cidi kama soo jawaabin, waana sababtaa sabata aad ugu malaysay in magaalada lafteeda la isku haysto.
Dhinaca kale, saxiib cabsida iyo qaylada gadabursigu waa real maaha conspiracy. Dhul aan geed geed u aqaan oo ceelberdaale ah oo xitaa reerihii deganaa aan garanay dhawr iyo labaatan sanno ka hor ayuu maanta Jibril Abokor ku dagaalamayaa. Markaa saxiib inuu dhulboob jiro waa xaqiiq jirta.
Reply ↓	Isaq Boy	October 3, 2012 • 16:10	Timacadde
Hadaad hadalkayga ku noqoto waxaan idhi “degmadan Lughaya”. Ma odhan “Magaaladan” oo dee magaalaba ma aha sidaan TV-yada ka arkay oo ma aha meel aad loo dhisay. Dadka degaankuna 80% waa reer miyi reer guuraa ah. Degmadana saddexda reer ee degani waxay ka soo kala galaan saddexda gees. Dusha oo waqooyi ah iyo hoosta iyo dhinaca bari galbeedna waa bad.
Gedabuursina way muuqata sida ay muraayadda (ookyaalaha) iyo caqliyada mu’aamarada iyo maleega wax walba ugu eegayaan. wax walna ay u siiyaan ahamiyad aanu lahayn una sii buun buuniyaan heer aad is tidhaa malaha waxay ka helaan inay cabsi ku noolaadaan oo waa waxa kaliya ee ay isku dugsan karayaan maadaama oonay jirin aragti iyo rabitaan ay ka midaysan yihiin
Reply ↓	haldoor isaaq	October 3, 2012 • 16:10	wali Ashma walaashay baal ii waraan timacade
walaal gadabuursi miyaaney dowlada somaliland tiirkeegii ahayn oo 9 sanoo hogaanka madaxtinimoo soo hayn.
waar reerkaa sidaay loo aafgaartaa oo sidee uu roon waa suaal ee?
hadii aad midhahaa cinaabka dushaa aad uu saartiidnaa way yuusayaan
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 16:15	Sheekadani ka socota Lughaya waa tabtii lagaga qaatay Djama Saylici kursiga senateur….ciise markuu ogaaday inaanu cod ku helayn kursiga parlement-ka lagaga badnaa ….ayuu isticmaalay inuu yidhaah Saylici maaha reer Jabuuti wuu soo talaabay….anaga ayaa ah reer jabuuti….fikirkana faransiiska ayaa u dhisay……nin halkaa xeebta ku dhashayna ma jirin xataa ina guleed dhaho…..ciise iyo canfar maahe waa markii isaaq gadabuursi iyo carab la qoray inay soo galayti yihiin…tana tu cusub maaha waa xeelad sanado badan laga soo shaqaynaayay….
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 16:18	Wiil Isaaq halkan hadii qof u dhashay Lughaya aanu ku jirin markaa wii ciise yidhaa uun baa saxiix ah ? waa yaabe….
Reply ↓	haldoor isaaq	October 3, 2012 • 16:22	isaaq boy
waa ruun walaahii reerkaa baacweyn baa kuu xidhane oo kalsoonii la’aan ‘aa just yuus kaliyaa baad kaa kororsaan
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 16:24	wixii ciise yidhaah waa saxeex….
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 16:26	haldoor bac wayn ayaa nagu xidan laakin ilaahay waxaan ka baryay inay sida koonfurta si ka daran ay noqoto sld…..amiiin
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 17:09	Timacade Magaalada Lughaya miyana dhulka ku dhex oolin maxaa moramaha ka reebaya mise waa xero Gadabuursi yaa lagu yidhi kkkkkkkkkkkkkkk
Timacadoow maalintii, in aad xasuusato mooyaane, golahanb ku soo bandhigaysay qorsha uu Gadabuursi horumar ku gaadhi karo oo aad sal uga dhigtay dekad ay Lughaya ka samaystaan, waxan kuugu jawaabay oo aan kugula taliyey in aad qorshehaagu noqon riyo ee uu waaqici ku dhisnaado. Waxaan ku idhi iska hubso inay Gadaboursi xeeb ay ku xisaabtamaan leeyihiin iyo in kale. In dekad iyo wax kale la dhiso waa mid fiican lkn waxa ka horeeya in la wargaliyo dadka kula degan ama kaaga badan degaanka.
Xataa ARDAA waxay aakhirkii ogaadeen inayna dekad manfac leh ka dhisi karin Lughaya haddayna arintaasi Ciise raali ka ahayn ileen dadka dekada wax kala soo degayaa cirka mari maayaane dhulkii Ciise baadiyaa meelkasta buuxa.
Waakan Saylaci oo mararkan dambe fahansan in uuna Ciise la, aantii AWdal iyo Salal waxba uga socnayn oo shirgudoominaaya xafladan lagu xod-xodanayo ragii ina la yaalka lagu sheegi jirey.
waakan link ainraa muujinaaya
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 17:10	http://ardaa.com/?p=119
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 17:16	Su, aasha aan Gadabuursi waydiinaayo ayaa waxay tahay maxaa badilay mowqifkii ARDAA, oo ay ka buuxaan rag xagjir Samaroon ah oo xeebta cid kale inay sheegato aan hore u ogalayn?
Reply ↓	nuur	October 3, 2012 • 17:23	waa gadabursi iyo ciise way is dhaleen borama ilaa diridaba ilaa jabouti cid kala saari kartaana ma jirtee joojiya waxan labdiina qoloba.
waxa cadayn kuugu filan in ay yiiin dad waxba u kala qaybanayn labada mdaxweyne ee jabouti soo marayba gadabuursi ayaa dhalay waliba maxamed case, sidoo kale gadabuursi Dahir rayale iayga dhalay. oo ku dhashay gogti waa galbeedkee ethopia. markaa meelna laguma kala maqna. cida kala gurtaana iyada wareersan. dhulkana xaqiiqo la inooma kala calaamdayn jaboutina gumaysi uunbaa ciise siiyee si isleeg uunbay u wada degenayeen. gadabursina kamu hadal xiligaa.
taas ku ilooba in dadku isku mid yihiin.
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 17:41	timacade waxbaa sheekada anaafooska kulaaban wali maaha sida laguu sheegaayo.
asalkabana waxaa fiican marhaduuna inagu jirin halqofoo bahabar muusa ah ama reer xeebeedihi ma aha inaan dooda lughaya kahadalo.
cali halkan masoogalaan raga xogtahayi ama dhulka yaqaani mana lagayaabo inay xataa kaaga sheekeeyaan sida runta ah
inata halkan soo gashi waa inta rabta inay imika dhulka iyo dadka bartaan dooda ay kula doodayaana adayrabaan inay runta kaasooritaan.
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 17:44	sahal habaryar adaaba naga war roone maxaad tidhi maxaa ardaa bedelay?
Reply ↓	Darbisamaroon	October 3, 2012 • 17:53	Timacade Gabdhahan Ciise Madoobe ee Sahal iyo Cali Dhareere bal waxaad waydiisaa su’aalahan hoos ku qoran bal si raganimo leh ha iiga jawaabaan hadii kale Legionairekoogii ha u tagaanoo meeshan rag baa fadhiya loogama baahna idinkoo kale inaad nasoo horfadhiisataane bal rag kale oo Ciise ah oo aan la tuur tuurno meeshan hasoo galaan lkn labadan way ku fashilmeen dooda waxayna iskugu dhurteen labo Fataal.
Adeerayaal dhulka u sheegta Sida Sacad Muuse oo dhaha Ciisaa leh hadaad ragtihiin wax ba aniga abti ha i odhan abtiga anaa riixa ma garatay , Bal u fiirso raganimada ay Muujiyeen reerka jaarkayagu damac qaawan ayay cadaysteen waxayna yidhaaheen dhulka iyo dadka degan anagaa iska leh. taasina waa hadii ay u marto oo ay naga qaataan dhulka oo ay xooga ay sheeganayaan iyo awooda ay ayagu ku kala xadaynayaan hadii kaga dhabeeyaan ha naga qaataan ninkii xoog leh ayaa iska leh dhulka taana hore ayaan kuugu sheegay.
Lughaya muran kuma jiro ee halkaa inoo dhiga waa Awdal ninkii muran ka keenana waa nin malagii galaye,Lkn goobaha Lughaya hoos taga oo ah Awdal xageed la doonaysaan idinku bal car warkiina kala cadeeya hadii ay daan ahayn Fataaliin.
Bal u fiirso hadalka odayadan Ciise Madoobe dhinac ay u socdaan iyo dhinac ay ka hadlayaan ma fahmin, Kaliya waxan ka fahmay in goobaha ka caaganaa doorashada loo fasaxo inay doorasho ka dhacdo taasi dee Samaroonba ma diidana oo waliba ay goobahaasi hoos tagaan Lughaya kkkk Dee taasi yaa diidan dadkii Samaroon ee degaankaasi deganaa way ogol yihiine maxay la buuqayaan reerkani….? Doorasho anagaa doonayna in sanduuq iyo cod lagu kala baxo oo ninka ugu tunweyni soo hadho taasi waataa.
lkn Ciisoow warkaaga kala cadee oo sheeg ma Woqooyi galbeed baad doonaysaan mise Awdal inay noqdaan goobaha lagu muransanyahay ee la yidhaa Damasha, Bildhaalay,Ceel-lahelay.,Ceelsheekh , Qulka iyo Cabdi Geedi. Lixdaa goobood oo doorashada ka xidhnaa oo ah dhulka Awdal ma waxaad doonaysaan in aad hoos gaysaan Woqooyi galbeed Hargeiysa mise waxaad raali ku tihiin inay ka midnoqdaan Lughay oo Awdal ah …..? Car bal su’aashaa si raganimo leh uga jawaaba.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 17:54	Aisha
Dee sowdiga arkaya cadaynta aan soo dhigay ARDAA oo Ciise u gacan haadisaykkk Jawaabta inigaa la, inaga sugi,
Mid waa inaad caawa iga barataa xataa B/Muuse ma, wada degto degmada Lughaya oo waxay leeyiihii badan oo reer Gabilay ah ama degaanka ay degaan laga xakumi jiriray Gabilay.
Kolkaas B/Muuse oo dhani Lughaya kaama wada taqaano oo waxa jira qaar aan MARUNBAA ku dhaamin xeebahaas.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 18:03	Darbi
Darbi maxaad qortay “QULKA” xagay ku taalaa? 6 gooboob mid QULKA la yidhaahdo kuma jirto ee magaca iska sax waa nasteexo AWOOWNIMO.
Reply ↓	Darbisamaroon	October 3, 2012 • 18:07	Horta ka jawaab ma Awdal baad doonaysaan mise woqooyi galbeed goobahan inay hoostagaan si fiican ayaan wax kuu waydiiyay hadii anaad ahayn nin aan is hubina u baydh meelo kale oo ka muuquuri jawaabta.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 18:16	Darbi
Magaca tuuladu QULKA maaha khaladkana adigu ma, lihi ee waxaa iska leh maqalka aad ka soo xigatay oo aan soo arkay ileen waa anoo Dila tuulooyin waabka ka samaysan sheeg-sheeg la i yidhaahdee. Magaca saxda ahi waa Hulka.
Su, aalahn jawaabtood kun jeer baan halkan ka idhi ee Hiildan ka baadho. Ma, imikaad soo nafistay? Imisaan ini lahaa waar wax midaan doonaynaaye maxaad nagu haysatiin? Ma goobaha la furayo ayaa diidantihiin?
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 18:19	Waa gar marka dadka qaar ku doodaan Gadabuursi ma, yaqaanaan waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidayaan waa DARBIGAN oo miidhan oo 7 cisho ka warkaad tidhi dib kuu su, aalaaya kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Darbisamaroon	October 3, 2012 • 18:23	Sahal
Anuu wali meel aad dood fiican oo raganimo jirto meel aad ku dhiibatay ma arkin kaliya waxaan arkaa adigoo habalaha halkan aad ku murmaysaane. Bal hada ayaan wax ku waydiiyay waana markii sadexaade ka jawaab goobahaasi ma waxaad la doonaysaa inay ka midnoqdaan Awdal-tii ay ahaayeen mise Sacad Muuse ayaad la mowqiftahay oo waxaad doonaysaa inay ka midnoqdaan Woqooyi galbeed bal ka jawaab adoon usha biyaha la dhicin.
Reply ↓	Darbisamaroon	October 3, 2012 • 18:26	Waar bal toloow naagan xun nakala qabta oo ha cadeeyo su’aashan aan waydiiyay ma anaa qaldan isagoo dumarka halkan ku aflagaadaynaaya ayuun baan aragnaaye goor muu warkiisa noo kala cadeeyay Fataal ibnal Fataal dhiladii ku xaartay was nacaa ku dhalaye meesha noo dhaaf aabahaa nacalaa ku yaale garc ibnal garac anaa hooyadaa wasa yaa fataal Ciise iyo wax sheegta anaa wasa yaa makhnuud.
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 18:31	BM cid kaga badan xebaaha lughaya ma jirto dadka beenta ka daa…
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 18:31	sahal ok waan gartay ardaa iniga cid iiga war roonayd majirin mar walbana wuxu ahaa qorshahoodu mar kay waxsoodiyaariyaan in ina cumar geelena loola tego ilayn halkaasaa ciisaha looga taliyaaye iyo waliba kuwa soomaaliland sheeganaaya mar hadaad wax qabanaysidna waa inaad cidii ad caawimo kahelaysaba loola tegaa kol aykutahay hay adaha caalamiga ana
midna an kuugudaro inuu ciise dhulkan kunoolyahay waan ognahay laakiindee waa gadabuursi jabuuti degan oo kale uun wixii gadabuursiga jabuuti ka helo uunbaad iniguna awdal kahelaysiin
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 18:32	Darbi
Han kuu jawaabee ma, Ciisaa dhulkan dega mise ina la yaal ayaad mowquf kooda itaal ku dhaafin waayey kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk waali iyo fayoobi wax u dhaxeeya ma aqaano anigu ee warkaaga caddee ileen qof aan jirin mowqifkiisa lama waydiiyee?
Reply ↓	Timacade	October 3, 2012 • 18:35	Aisha……Anigu huuno waan xafidsanahay taariikhda anifoos oo cidina iiga sheekayn mayso. Jawaabta Cali Durgiye bixiyey waa jawaab siyaasadaysan, lakiin waxa nasiib daro ah in dhalinta gadabursi ee halkan soo gashaa aanay jawaabo ay xirfad siyaasadeed ku dheehantahay haynin.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 18:35	Darbi anigu waxan aad uga helaa markaad dadka ula haddashid siddi diqsigii kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Car mardambe i cay waxa kugu dhaca waad arkiye
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 18:36	gadabuursiga jabuuti waa soo galayti….ciisena waa inan la yaal….
Reply ↓	Darbisamaroon	October 3, 2012 • 18:40	Adeer dhulka waxaad ku tahay parasite raac woqooyi galbeed hud baad iigu jirtaa wlaahi in aanan midh ka reebi doonin Ciise ah oo u fataala Sacad Muuse dib dambe uma dhacayso inaad kolna anaga war naga qaadaan kolna aad war kasoo qaadaan Sacad Muuse Fataal baad tahaye ma is taahishid in lagulasii had hadlo rasaas ayaan kula dhici lahaa hadaad i horjoogto nasiib daro labo wadan ayaan kala joognaaye lkn kolay gacantayda ayaad ku dhiman doontaa aakhirka sidaa ula soco yaa inan la yaal , Waxaad culays xunoo na dul yaala dhulka anaa leh taako kuuma ogoli ilaa yoomal qiyaamaha.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 18:41	Aisha Habaryar Ciise cidna aqoonsi in uu dhulkan dego ugama baahna ARDAA daasad ka taagi mayso Lughaya haddayna Ciise raali ka ahayn.
Ciisahan Somaliland waxay joogaan dhulkii Eebe ku beeray ee ay awoowyaashood ka dhaxleen halka Gadabnuursiga Djibouti jooga ay yihiin dad u shaqo tagay degaan ayna u dhalan asal ahaan lkn maanta muwaadiniin ah sida S/ Muuse oo aanad marnaba arkayn iyagoo ku leh Djibouti ayan leenahay. Gadabuursigu ma Isaaq iyo Soomaalida kale ayay Djibouti ka xigaan Aisha? Caawaabad war keentay mise dariiqii aan hore iyo dib u socod midna lahayn ee raga tolkaa ah ayaad u baydhay habryar kkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 18:44	Darbi
I dhagayso waa is waashaaye car mardame i cay waar……car cay ku celi iyo hanjabaad , waar ma, inaad sidaas i leedahay eh
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 18:51	sahal!!!!!!!!!!!!! sorry habo
waryaa derbi maka dhacaad cabtaa? ninwaalan tolkiibaa u fayaw walaahi hadaan caawa ku agjoogo waan ku qaniinilahaa
waad naceebaysay ninka caytama waa nin an wax isla hayn waxaad naga dhigaysaa dad daciifa raganimada iyo geesinimadu waa inaad doodaada cadaysato,ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeb caleeeeeeeeeeeeeeeeeeeg
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 18:58	Darbi adigu sheekada lughaya ka bax….kuwani waa ma xishoodayaal….isku halayta dawlad jabuuti ayay kaga adag yihiin dadka masaakiinta ah ee habeen biyo looma kabadeen…
20kii sanadood ee samaroon isku jeeday isagu ayaa isagana loo maqnaa….
Reply ↓	Darbisamaroon	October 3, 2012 • 18:58	Aisha
Afkaaga iga hayso haduu allahaa alla yahay.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 19:00	Aisha mahadsanid Habaryar ee kan ha iiga baqin caydiisa aniga iga cadhaysiin mayso, markii u horeysan ee siddan ragan tolkaa ahi meeshan iigu caayaana maaha, aniguna waxaban u qaatay caado raga Gadabuursi iska leeyihiin kaaga sii daranee isma qabtaan. Walaahi aniguse waxan jeclaan lahaa inay raga reer abtigay ahi dhooqadan ay dhax fadhiyaan iskaga kacaan oo ay dadka sidda raga ula doodaan.
Sorry Aisha haddaan ragaad canaanatay kuu dhaafay kkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Aisha	October 3, 2012 • 19:03	sahaloow aniga iyo adiga iyo darbiba waan iska googaa cigalaysanaynaa dhuka Illaahaybaa leh intii kasokaysana ninwalba aqalkiisuu leeyahay meeshuu doonoba haku yaalee maamulkana kolba cidii meesha ubadan uunbaa qabata haduu ciise jabuuti maamulo gadabuursina awdal uunbuu maamuli wax selel la yidhaahdina majiro
iyeynaan isku danbaabin adna aabahaa iyo hooyadaa ha ukala eexan ogowna iyadaa afarjeer xaqkugu leh halka aabuhu mar kugu leeyahay
Reply ↓	Galbeedi	October 3, 2012 • 19:15	kkkkkkkkkkkkkkk war meeshu waa iska fadhi ku dirir ee birta dhiga cidna cid meel u dagan yahya ka qaadi maysee lkn dhibta u wayni waxay ka taagan tahay meel aad sheeganayso oo hadana aanad garanayn kkkkkkkkkk saw sahalaw yaab maaha?
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 19:18	Aisha
Waa siddaad sheegtay oo meeshan waxa aan ku qorqornaa maaha wax degaanada iyo dadka joogaa ku camalfalaan. Cid ina dirsatay oo waxan go,aamino meel marinaysaana ma, jirto waana nasiib daro in ayna dad badan oo rer abtigay u badan oo halkan soo galaana ayna fahmin waxeenuba in uu kaftan iyo rayi uun ku egyahay.
Anigu hooyaday aad baan u jeelahay kmana eexanayo haday i ogaan lahayd in aan halkan tolkeed ku yara xiiqiyana kab ayay igu gudbi lhayd kkkkkkkkkkkk oo xagaa iyo Gadabuursiga lagama mari karo.
Warku hadduu yahay Ciise way nala degaan Awdal iyo Salal lkn talda ha noo daayaan aan wax xamunee kolay anigu taas waan ogolaan lahaa ee waxan diiday in ay abtiyaalakay i yidhaahdaan ma jirtid.
Salal warkeeda iyada waxay la qabtaa Saaxil, Maroodi-jeex, ku waas haddii ay meesha ka baxaan iyaduna ha ina dhaafto lkn Ciise reer Awdal iyo magacii laga xaday ayay iska dugsan doonaan. Mid baanse kuu hubaa in ayna dhulkeenu horumar gaadhi doonin inta aynaan isfahan iyo wax wada qabsi bilaabin.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 19:18	saxid : aan wax xakunee
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 19:29	Galbeedi
kkkkkkkkkkkkk Galbeedi waad i arkaysaa in aan ka yara xayraansanayo Darbi waxaase nasiib daro ah in ayna ragani bilaa cay dood cidna lagali karin. Waa run oo markaad dhul aanad aqoon amaba degin damac kula galo markasta waa lagaa gacan saraynayaa lkn miyayna ka haboonayn inay dhulka naga daba bartaan oo ay HULKA yidhaadaan halkay QULKA ka leeyihiin kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hooyooyin fiicanbaa ina dhalay ee waan in aan ku mahadinaa aniga iyo adigu ciisahan iyo Isaaqan kale ee raga karbaashaya yaynaan ku dayan.
Reply ↓	Timacade	October 3, 2012 • 19:44	Darbi……Is deji, saxiib, caydu waa cad doqoniimo. waan hubaa inaad nimankan ciise dood iskaga celin kartee, take a deep breath and let go.
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 19:45	ala maxaad kala jabka gadabuursi ka faa’iideysateen ood shirqool u soo dhigayseene….hadmay idinka dib idiinla go’daa….
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 19:50	ninka horta idiin gabyay ma furlaba mise odox gob ee yidhaah
waa niman masaasada oo moromo daynayne
waa niman maroorsiga yaqaan oo macawis dhaafayne
eesh calaa qiyaas waa tabteedi meel walba idinkaa leh
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 20:23	Darbi inaadeer wax danbe ha u soo qorin walaa kan walaa ku kale….aniga igu daa waxay rabaan ha i yidhaadaan….walaahi waxan iyo wax ka daran ayaan soo aragnay soona maqalnay…
awrkan meesha boodboodaya ninlaa u doobiyay inaga kuweeni ayaa halkaa ina dhigay….guushuse inagay inagu danbay insha allaah….is badilka adduunka ka nacaya ku taamilo qaado…waa iska caadi inaan doorasho kasta wankii lagu sadqaynaayay u noqono…baaqiqa ka hadha dadkeena ee ilaahay ka badbaadsho ayaa ka aarsan doona ee is qabooji….
iyagu wajigoogi ayay qariyeen adiga wajigaaga yayna kaa gubin….
Reply ↓	mustafe	October 3, 2012 • 20:38	Samaronka maantu waa sida nin yiri shabeelbaan xilib duldhigan isagaa wax iikala xadey imaamule hadana waanka caban. Ceelbardale wuxu isku badaley lugheyn. Sababtoo kolba shaqsiga ku dul fadhiya kursiga maqaarsaarka ayay dhulkooda sheegtaan si kolba kaas ay kala xidhiidhaan. Reyele Caalbardale, Saylican segaanada Saylac. Gadabursi maantu waa sadex: abti uroone, seedi uroone iyo jeebka uroone. abti uroone wuxu yiraahdaa waa wda dhalaney, seedi uroonena wuxu yiraahdaa gogoshaan xeeriyaa halka jeebka uroonena mishaarka ka qaato siiraanyo. waxan xasuustaa markii wadanka Soomaaliya burburaayey nimankii duleedka Sowsowley ee gabdhaha Samaroon dhaleen maalintii snm timideybey abtiyaashood uraaciyeen qaarkoodna dib loomaguma arag Borama iyo nawaaxigeeda ilaa ay tolkood taladii Samaron maroorsadeen.
Kuwii Jabouti taladaha waqti haynaayeyna wallaalahooda Soomaaliyeedbey ku sooryeeyeen. Kadib markii ay Samaroonkii deganaa Djbouti ka sifeeyeen shaqooyinkii ooy dibaha uga carareen maantana tanaaba taagen. Habase ahaatee Ciisaha aan anigu arkaa waa dad yaqaana dhaqanka Soomaalida ilagu amaanana istaahilaha laakiin dhibi waxey ka taagan tahey nin Uurweyne-marna abti leh marna uunta ku gooya. Ciiso oo dhami maaha wada xoolo cirdoone waxa ah shaqsiyaad dibadjooga iyo hargisa jooga. toban sano ka hor ciisaha wax aan geedi iyo mamaasan ahayn ma maqlin hadanse waxan ogaadey in Ciiseba Fuurlabo yahey.
Riwaaydahani ma wadaan Ciise waa hadii runta la rabo waxa wadaa waa maamulka Hargisa oo fadwo raba inuu ka dhex abuuro dadka waxey adeegsadaan Ciise ooy ku awkacsadaan markey dantooda ku gaadhaan wey tuuraan. Wallaahi marka qaarkood anigu ciisaha sida siyaasiyiinta R.hargisa ubahdilayaan waaban ka naxaa. Mida kale ciise dhulbuu rabaaye waaney cadeysteenoo snmbaa marlabaad adeegsaneysa laakiin dadka aanan kala baxeynin waa snm nidaamkeeda. Mida kale Ciise qaranbaa kaga dumi kara damaca xeebaha Awdal taasina waxa ka danbeeya in siiraanyo nidaamkiisu rabo in djbouti lagu kala dareero sababtoo ah Soomaaliyey taageereen walisa ciisaha badankiisu ma mahminoo meelsokeyka waxka fiirinyaan sida degaano kooban iwm.
Reply ↓	Sahal	October 3, 2012 • 21:02	Mustafe Hal su, aal ah oo aan dhowr jeer halkan soo dhigay lkn laga wada gabaday.
Waa maxay dhibta ay Gadabuursi maanta Ciise kaga cabnayaan? Qadiyadan Lughaya Ciise ayagaa bilaabay oo cabasho dawlada uga gubiyey lkn cabashadoodu waxay ahayd in degaanka bariga Lughaya ee beesha Ciise ku badan tahay aan Lugahaya laga goyn, xaquuqdii doorashadana loo soo celiyo. Bal ii sheeg sidda codsigaa Ciise ay Gadabuursi dhibaato ama S/Muuse taakulayn ugu arkaan?
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 3, 2012 • 21:22	sahaloow,
Raali ahoow maanta waan yara mashquulay sawkuwaa kuugu wada ururay sida shiniidda rag iyo dumarba , cajiib xitaa ma leh aqli ay ku fahaman in ay doodu ku qurux badan tahay kana fahan iyo afkarad toosan tahay markay dad koobani mawduuc cayiman wada hadlaayaan.
Reerkani way diideen in ay hal suaal si hufan uga jawaaban nabad iyo colaadna midna diyaar uma ahaa issaq haddu la hadlo ciisay u boodayaan ciise hadday wada hadlaayaan Issaq bay cayaayaan haddi labaada midna la joogin gedabuursiga dhexdiisa ama laftarkiisa ka fakan doonin.
waxaan ku soo noqon doona markay xaaladu yara xasisho .
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 21:26	sow taad ku soo qori jirtay adiga laftigaagu isaaqoow aan wada hadalno markay abaartu ina dhaafto snm baan isku ahayne….
shirkii ciise qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaad snm tihiin….s/muuse taasu ka jawaabay oo yidhi dhulka anaga iyo ciise cid aad ahayn laguma arki karo…
Reply ↓	Haboon	October 3, 2012 • 21:36	Ilaahoow haa iyo maya ha naga wada siin….ma raga dumarka ay qabaan caaya ayaa anaga noo faanaya….intuu soo galaytigu idin dhex jooga ayaad dad tihin shib dhaha….somali oo dhan idin la yaabtay….
Reply ↓	slander	October 3, 2012 • 22:11	haboon hadii sland sida somalia qofkaaliitaa walahay majiro adiga waayo qofka danta ugubada ku haystaa waa adiga anigu waan ogahay cadow gayga iyo nacabkayga lakiin gudabiirsi maya qaan isaaqnamah reer ka aad tulada wada dagan tihiin malaga yaabaa in aad ku danbayso sida reer sool ama buuhoodle ooa aad kafikirto talow raashin xaguu kaga imanayaa ilahay colaad hakabaryin anagu waxanu kuwaynay malyuun qof walina noosicad lakiin adigu maad ara gurina kamadumin wayaha aduunka kawarayso ogow majiro qabiil dawladiisii diyarado ladhacday aan isaaq ahayn waa maxa dhibatada kabadan ee aad noo gaysan lahayd
Reply ↓	Marunbaa	October 4, 2012 • 03:42	Durkiye meesha waa laysku jafay balse waxba garaadkaaga ha iigu daba gabane, ninka waraabaha qalaya hadalka ugu horeeya ee uu leeyahay ma dhugatay. Sheekadaad meesha la rafan jirtay muhiimadu waxay noqotay in gabay la turjumay oo wuxuu doono noqon kara aanad hayna cadaynta sida kii ugaas Nuur ama islaantii Geedi haame ka muusanawnawday.
Timacade, iyo isaaqboy, inbadan baan idiin macneeyey micnaha unopposed iyo taariikhdu meesha ay ka timid. Cali iyo sahal inay idiinka jawaabaan hadaad sugaysaane, dee waraabaad hees ka sugaysaan markaa
Reply ↓	Timacade	October 4, 2012 • 04:22	kkkkkkkkk Marubaa, lakiin cali durgiye waa xariif and I like his explanation. Wuu qarameeyey kelmadii intuu ka baxsan lahaa.
Waan ka xumahay aniga laftaydu sida laysku baxsaday meesha maanta.
Anigu Saxiib Unopposed tariikhdeeda buug baan ka qori karaa iyada oo tafatiran, lakiin dee labadii nin ee ciise haddii aan isugu wada tegno raganimo maaha, markaa malin kale ayaan la sugi doodayda.
Reply ↓	Sahal	October 4, 2012 • 08:00	Timacade
2 nin ee Ciise inytoo al, isku wada tagey ayaa haddana xaalkii Gadabuutrsi ku dhamaaday gabadh calaacalaysa, waan ta aniga Sahal ahaan iigu darin, iyo rag caydaad arkayso maciid biday markay talo ku ciirtay.
Waxaase nasiib daro aan Timacade looga fadhiyin ah in aad ku tilmaantid in meesha la isku baacsaday ileen waa aragaa oo meesha waxa ka dhacay rag cay doqoniimo gargaar ka dayay mise Gadabuursi ciday cay u miisaan way baacsadeen kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 4, 2012 • 08:07	@Timacadde & Marunba,
kalmadda aad la boodaysin iyo cajaladdan dadka dugaagoobay dugaaga ku cunayaan oo lahjadduu ku hadlima aan fahmin idinkay macne iyo faaidddo nii samayn doontaa waxayna idinka tahay mawduuca ku daba gadiya si aad uga baxsataan runta iyo xurdada raga ciise nigu qabteen laakiin ciise wuxuu leeyahay taarged cad oo ah in u CLANS DEMARCATION LINES-KII la wada ogaa ee 1960-kii somaliland u qeexday beelaha soomaaliyeed u cidna aayohooga kula gorgortamin biya shubka doodeenu waa halka wixii intaa ka soo hadhay waa nacadhiig iyo nin laga reeyeey oohintii.
Reply ↓	Sahal	October 4, 2012 • 08:13	Ali In la, igu ururo diyaarbaan u ahay waxna igaga qaadi maayo nin igula mormaaya dhul uuna waxba ka aqoon lkn reer abtigay waa nasiib daro in siddan isku ceebeeyaan shabakadaha ay umada soomaaliyeed oo dhani wada aqriso.
Gadabuursi 20 sanadood ayay khiyaali iyo Boqortooyo aan jirin, Axmed Gurey ayna meelna ka soo galin, Saylac iyo dhul xeebeed ayna waxba ku lahayn isku maaweelinaayeen dee qofka aadamiga ahina hadduu riyo run moodo, runtu maalintay soo gaadho cabaadkiisa iyo maroora dilaaciisa ayay dadku ka yaabaan waana waxa ay siddan ugu caytamayaan kkkkkkkkkkk lkn ayaa u joojin doona.
Reply ↓	Darbisamaroon	October 4, 2012 • 08:35	Bal daawada naagan xunee eygan eyganu dhalay ee ahbalka ah ee Sheekha isku sheegaaya , Aadan Zero isagoo dhulka xeebta Awdal u doonaaya tabaruc lagusoo raro reero Sacad Muuse ah ,bal daawada waxa uu ku hadlaayo nacaalaa dhalay dhulk aanu lahayn isagu ayuu aayado iyo quraankii SNM ta u daliishanaaya kan waa bahal is nacay baastar ah,
Kuwan oo kale ilaa ay Samaroon ku dhex khaarajiyaan moyaane Masjidka dhexdiisa uu futada dhex foor foorariyo iyo beenta ka akhriyo wax inoo hagaagayaa majirto waana hubaal in habar kastaaba inoosoo kaadi tagtay Samaroonoow.
Waxaa wada qaska xeebaha Awdal iyo dhulboobka wa ragan hoos ku qoran wana in ninkasta meeshiisa iyo gurigiisa loogu dhaco oo madaxa laga toogto , waa in la sameeyo 50 dhalin yar Samaroon ah oo ku hubaysan bastoolado oo khaarajiya ragan hoos ku qoran ninkastana ugu taga meeshiisa, anigu amri maayo in reer baadiye iyo habar gabowday oo joogta xeebta Awdal oo Ciise iyo oday dhago daloola oo gaboobay amri maayo in la dilo lkn waxaan amrayaa in la dilo ragan hoos ku qoran oo ah jeegaan ku bahoowday dhul boobka xeebta Awdal iyo deegaanka Samaroon.
1- Ismail Omer Guelleh
2- Gudoomiyaha degmada Xariirad
3- Maxamuud Xayd oo uu seedi u yahay Ismail Calool
4- Ina Aw Saciid Waa ninka ka masuul ah shirkada SomCable
5- Sheekh Aadan Zero
Shantaasi nin ayaa budhig u ah dhul boobka Xeebta galbeed ee Awdal hadii aan ninkasta meeshiisa lagu soo khaarajina way hirgalaysaa riyadoodu oo aan daawano weerarka lagu hayo dhulkeena waana halis,
Inaad cadhooto ayaa ka fiican oo dhaanta inaad niyad jabto,Hal qof oo aad disho waxaa kaaga cabsoon doona 100,000 qof oo weerar kugusoo qaadi waana in si deg deg la diyaariyo 50 dhalin yar Samaroon ah oo loo furo tamabar heer sare ah si ay uga hortagaan weerarka soo socda loona iibiyo hubkooda oo ah nooca fudfudud waa Patoolado si nin kasta meeshiisa loogusoo khaarajiyo oo aan uga hortagno waayo daad intaanu kuu iman ayaa la iska moosaa.
Reply ↓	Haboon	October 4, 2012 • 08:49	Slander
Hadaad diyaarado haysan lahayd habeen kamaad daahdeen…imikaba sow ma dishid oo ma dooxdid dadka safarka ah iyo reer miyiga oo dhulka ha ka guuraan ma lihid…
Midbaase iga yaabisay…reerkan s/muuse hadaanay isaaqa il ka haysan ama dawlad isku sheega il ka haysan dadka masaakinta ah ee reer miyiga may laayeen…hadaan isaaq wax ka sheego wax leedihiin reer kaliya ayaad wali is aragteene yacni intii kalena way kuu danbeeyaan hadaanad ahayn ka wax dilaya sow walaalkii ma tihid miyaad u diir nixi doontaa waa maya ….sld hadaan wax ka sheego waxaad leedihiin dadbaa igaga dhintay oo kaadi baan usoo cabay…ma waxaad u soo dhimateen inaad dad kale laysaan ama aad dulmidaan ? wa iga su’aale..
Qof ilaahii abuuray u joogo laguma yidhaah xageed wax ka cuni…laba dhagax dhex dood ayuu ilaahay kugu arsaaqi karaa…anigu ilaahay kama quusan kama quusan doono ilaa naftu iga baxayso…adigu hadaad dadka arsaaqada u haysid waxna dili kartid bal malaayiinkii kaa dhintay nafta ku soo celi waadiga awood ku faanayee…
Buuhoodle calanka buluuga ah ayaa ka taagan maanta… siyaasad xumadaada yaa ka taagtay…waxayna taagan yihiin
hadii daaro fooqliyo tuukaan maal la ii dhigo kuma soo dabcaaye..duunyadaad dhiibaysanaa adiga uun baa
daadshayee…nin midnimo arkaayana maal laguma dagi karo’ee
Hadaba dawlada aad radinaysaa inaad heshid waa tu noocee ah ? dadka aa rabtiin inay dawlad idin la dhisaan waa dakee ma kuwan dulminaysaa ? walaalnimo derisnimo iyo islaamnimo intaba diideene sidee la idiin afgartaa ?
Reply ↓	Haboon	October 4, 2012 • 08:56	Darbi odeygan Zero waxaan u hayna Deheeye laa’tikhoof huuno…
Reply ↓	Darbisamaroon	October 4, 2012 • 08:58	Fariin Ku socota Dhamaan dhalinta Samaroon meel kasta oo ay jogaan si fiican u dhagaysta.
Reply ↓	Darbisamaroon	October 4, 2012 • 09:09	Aqoonyahan Saleebaan waan kaa aqbalay waanan is difaacaynaa baaqa aad noosoo jeedisay waad ku mahadsantahay , anuu waxaan doonayaa in aan Darajada Amiral ku gadho Dhiiga qaar aan ogahay ee iigu duceeya Samaroonoow marka aan bilaabo dilka iyo xasuuqa waa inaad iigu yeedhaan Amiral Darbisamaroon , intaasaan idinka codsanayaa oo ah darajo aad igusiisaan kolba inta aan ka dilo beelaha darifyada ee ah damaaciyiinta dhulboobka markaan bilaabo dilka idinkuna waa in aydaan igala bahaylin darajada Amiral Darbisamaroo.
Reply ↓	Darbisamaroon	October 4, 2012 • 10:48	Beesha Maxad Case waxaan ka codsanayaa inay gacan saaraan ninkasta oo soo farogaliya deegaankooda, Ma Reer Maxamuud Nuur ayaad ka yartihiin bal akhriso baroorta Sacad Muuse iyo sidaan u barokicinay kadib dilkii Seemaal.
Reply ↓	Haboon	October 4, 2012 • 11:26	Darbi ma kuwan yoomal qiyaamaha aan rumaysnayn ayaad ka wax ka akhridaa…
Reply ↓	madhabaa	October 4, 2012 • 14:00	udaygii dhulkeenii dhadhamuu ka raacee dhabhaduu dhawaaq dhalinyarada raacoo dhiidhiya dhulkana dhici
dhuuni iyo wixii dhiman dhibanaha qurbaha jira isagaa dhamaystiri dhabmiyaa dhwaaqu mise waaba dheel dheel.
Reply ↓	aisha	October 4, 2012 • 19:23	http://www.youtube.com/watch?v=HGX44qCGN1M&feature=player_embedded waa karogoo hadanasaar
Reply ↓	aisha	October 4, 2012 • 19:26	Reply ↓	mustafe	October 4, 2012 • 19:56	Sahal
wallaal waanku salaamey su’aasha aad iweydiisey jawaabteeda horta waa la iga leeyahey.Mase laga yaabaa in shiki jiro kasoobaxey shirkii ceelgaal iyo SNM baanu naheyda Ciise siyaasiyiintoodu yiraahdeen kkkkkkk. Dhulkana aadbaan ukala aqaanaa marka laga reebo degaanada Lughaya xeebahana familigeyga qaarbaa ku nool meelo ay ka mid yihiin Caro-wareen, buuraha Cad-Cad, Fadhi-wanaag, weeraar iyo baalaha Boon. Dadkuwaxey ahaayeen dad isku wada eeg oonan kalaba garan karin. xaalka qaado nimankan caytamaaya.
Hadaanse inta karaankeyga ah ka jawaabo waxan qabaa in labada beelood (ciise iyo samaroon) qaldan yihiin. Sabaha ay uqaldan yihiina waxa ka mid ah jabhad beeleysan oo Harti iyo r.woqooyi oodhami ogyihiin ineyna meesha wax dhaafsiisan faan joogta ah iyo iney iska wada dhigaan ILMA LIBAAX SANKA TAABTE. iney talo ula tegaanbaa qaladku ah. Waxa ay rabaan baa ah fidno ay ka dhex aloosaan Djbouti, Kililka shanaad si Gadabursiga iyo Ciisuhu inta ay isku maqan yihiin dhulkooga la wareegaan. Markaa dhibaatadu maaha beelaha ee waa nidaamka jiro oo ah mid salkiisu yahey cunsuriyad.
Anigu waxan eegayaa meelka fog in qabiilnimo iyo cadownimo aan wax dheefa kasoo gaadhey Samaroon iyo Ciise la ina kala dhexdhigo. Saw markaa noqonmeyso doorshadu wayka dhici iyo maka dhaceyso in dadka degaanada la rabo in lagu bara kiciyo M.muuse iyo badaraxaan,dabadeedna dadkan mirqaansan ee ilaaheyka siiyey Ingriisbaanu Somalilandka dhaxalney.
Reply ↓	gudoon	October 4, 2012 • 20:08	doorasho oo dhan halaga mamnuco gobolka awdal siduu udhan yahay maxaa baase la dooranaya ma dowladaan an jirin ruyaada hala iska daayo,, gadabursow
Reply ↓	Tallman	October 4, 2012 • 21:27	Doorashadu waa khasab,Ciise iyo Samaroona waa Reer Somaliland.Ku lahaa doorasho ha laga mamnuuco yaa ka mamnuucaya doorasho Dalka Somaliland!!@Darbi Samaroon doodaadu waa very interesting,laakiin aabahaa was sharmuuto anaa Ciise W…,waxaasi waxa aad ku bahdilaysaa dadkeena,common man Darbi Samaroonkii hore noqo.
Reply ↓	gudoon	October 4, 2012 • 21:42	Dabadhilifka idoorta uma jwaabno waa wax dhintay oo bilaa dhiiga wixii hada ka sheekeya doorasho iyo ruwaayada idoortu dhigayso,,god bless awdalstate of somalia gadabauursi waa somalilaaaaaa ka nxow dhimo
Reply ↓	gudoon	October 4, 2012 • 21:47	correction,, gadabursi waa somaliwaynnnnnnn 99%
Faaqidaada Arrimaha Bulshada: Caydu Waa Cad Doqoniimo	Shukri Ismael Dabar on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…hiildan on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…Kuluc on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…Darbisamaroon on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…Darbisamaroon on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…Kuluc on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…CABDILE on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…madhabaa on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…hiildan on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…slander on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…	Dr Cumar Cusmaan Raabe (AUN)Geesiga Dhulkiisa, Guusha U Horseeda, Geerida Dishaay, Geedkaa Ha Go'
Blog Stats	1,208,885 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)
BBC SomaliHawlgal xagga ammaanka la xiriiraBaarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday miisaaniyadda dawladdaSuuriya: Dowladda oo weerartay QuseyrImran Khan oo dil ku eedeeyay MQMSomaliland: Xuska 18ka May VOA SomaliAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. The New York TimesGermany Accuses Man of Being Somali Pirates’ AccountantSomalia: Thousands of Peacekeepers Have Died During Mission, U.N. SaysCourt Papers Offer Details in Terror CaseSomalia: Famine Toll in 2011 Was Larger Than Previously ReportedReporter for Government Radio Is Killed in Somalia	Blog at WordPress.com.